यी महिलाको इमान्दारीको सर्वत्र चर्चा ! १० करोड देख्दा लोभिइनन्, आफ्नो ३ सय मात्रै लिइन् – ramechhapkhabar.com
यी महिलाको इमान्दारीको सर्वत्र चर्चा ! १० करोड देख्दा लोभिइनन्, आफ्नो ३ सय मात्रै लिइन्
१० करोड रुपैयाँ अगाडि देख्दा मानिसको इमान डगमगाउन बेर लाग्दैन । तर, एक महिलाले हातमा आइसकेको १० करोड रुपैयाँ देख्दा पनि आफ्नो इमानदारीलाई डगमगाउन दिइनन् । उनले आफ्नो भागको ३ सय रुपैयाँ मात्रै लिइन् । घटना भारतको केरलको हो । यी महिलाको नाम समिजा के मोहन हो ।
तिरुवनंतपुरमको दैनिक अखबार मातृभूमिका अनुसार समिजा पट्टिमोटममा बस्छिन् । ३७ वर्षकी समिजा २ सन्तानकी आमा हुन् । उनले राजगिरी अस्पताल नजिकै लट्रीको स्टल चलाउँछिन् । समिजाले गएको आइतबार आफ्ना केही लट्रीका ग्राहकहरुलाई फोन गरेर आफूसँग बिक्री नभएर १२ वटा टिकट बाँकी रहेकोले किन्न चाहेको भए ती टिकट किन्न आग्रह गरेकी थिइन् । अलुवाका पीके चन्द्रनले समिजालाई एसडी ३१६१४२ नम्बरको टिकट आफ्नो लागि राखिदिन भनेका थिए । उनले टिकटको पैसा २ सय रुपैयाँ (३ सय २० नेपाली रुपैयाँ) पछि दिने भनेका थिए ।
संयोगले त्यही टिकट नम्बरमा ज्याकपट पर्यो । ज्याकपट उपहार ६ करोड रुपैयाँ (झण्डै १० करोड नेपाली रुपैयाँ) को थियो । चन्द्रनले टिकटको पैसा तिरेकै थिएनन् र टिकट अझै पनि समिजासँग नै थियो । लट्रीको नियमअनुसार जो व्यक्ति टिकट लिएर भुक्तानी दावी गर्न जान्छ उसैलाई भुक्तानी दिइन्छ । समिजाले चाहेको भए उनी टिकट लिएर दावी गर्न जान सक्थिन् । उनले चन्द्रनसँग त्यसको पैसा लिएकी पनि थिइनन् । तर, समिजाले आफ्नो बोलीको मर्यादा राखिन् र टिकट लिएर चन्द्रनको घर गइन् ।
समिजाले २ सय रुपैयाँ लिएर टिकट चन्द्रनलाई दिइन् । चन्द्रन, उनकी पत्नी लिला, दुई छोरीहरु र एक छोराले स्थानीय मिडियासँग समिजाको इमान्दारिताको निकै प्रशंशा गरेका छन् । समिजाले आफूले लट्रीको टिकट वास्तविक विजेतालाई दिएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । उनले आफूलाई आफ्नो इमानदारीको प्रशंशा गर्दै कैयौं फोनहरु आइरहेको बताइन् ।